Our story – Khonu – ခိုနူ
Khonu – ခိုနူ
ကျွန်တော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ် ။သူများနိုင်ငံမှာပဲတချိန်လုံးအလုပ်လုပ်မယ်၊ သူများနိုင်ငံမှာပဲတချိန်လုံး ကျွန်ခံမယ်။မိသားစုဆင်းဆင်းရဲရဲမလောက်မငှဒီလိုပဲသွားရင်တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကတော့အရမ်းကိုသေချာတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတခုခုလေးတော့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်။
ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းလုပ်မလဲဆိုတာလဲအဖြေမရနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် မလွယ်ဘူး၊အရင်းအနှီးလိုတယ်၊နည်းပညာလိုတယ်၊ဈေးကွက်လိုတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့အသက် ၈၀ ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့အဖေကိုတိုင်ပင်တော့လည်း ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးတခုခုလုပ်ချင်တယ်။ဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့ ဒီအတိုင်းကြီးလက်ကြီးပိုက်ပြီးအိမ်ထဲမှာထိုင်မနေချင်ဘူး။လှဲမနေချင်ဘူး။တခုခုလုပ်နေရမှ ကျေနပ်တယ်လို့ပြောတယ်။
လုပ်ငန်းလုပ်ရင် သမာအာဇီ၀လည်းဖြစ်ရမယ်၊လူများကိုလည်း ကောင်းကျိုး ဖြစ်စေရမယ်။ကိုယ်လည်း အမြတ်အစွန်းရရမယ်လို့တွေးတယ်။ကိုယ်ကရောင်းကောင်းတယ်။အကျိုးများပေမဲ့လူတွေအတွက်ကောင်းကျိုးမပေးရင်မလုပ်ချင်ပြန်ဘူး။သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးကိုထိခိုက်စေမယ်ဆိုရင်အမြတ်များမယ်ဆိုရင်တောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုအခိုင်မာတည်ထားတော့ဘာလုပ်ငန်းလုပ်မလဲဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ထွက်မလာဘူး။ ကိုယ်လုပ်တတ်တဲ့ဟာကို အသေချာစဥ်းစားလိုက်တော့ ချင်းရိုးရာအစားသောက်တွေလုပ်တတ်တာကို ပြန်မြင်လာပြီးအဖေနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့ အဖေကတော့ ဝါသနာပါတယ်၊ လုပ်ချင်တယ်။လုပ်တတ်မလားလို့မေးတဲ့အခါဘာဖြစ်လို့မလုပ်တတ်ရမှာလဲဗျာ၊အဲဒါတွေကအမြဲတမ်းလုပ်နေကျတွေပဲလုပ်တတ်ပါတယ်လို့အဖေကပြန်ပြောတယ်။အဲဒီလိုဆိုတော့ဒီချင်းရိုးရာအစားအသောက်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်လာတယ်။
2018ဝိုင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည် ဝိုင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် မြေယာကိုလေးစားရန် စိတ်အားထက်သန်မှုဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်
ညီလေးကိုတိုင်ပင်တဲ့အခါကျတော့ ညီကတော့ သဘောမတူဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက ခရစ်ယာန်ဓမ္မအမှုတော်ဆောင် တယောက်ဖြစ်တယ်။ အမှုတော်ဆောင် တယောက်ရဲ့အိမ်မှာ Alcohol ပါတဲ့ခေါင်ရည်အစားအသောက်ကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချမယ်ဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုမြင်မလဲဆိုပြီးသဘောမတူအားမပေးဘူး။ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးကလဲညီလိုပဲပတ်ဝန်းကျင်အမြင်မှမသင့်တော်ဘူးဆိုပြီးလုပ်ငန်းကိုမလုပ်စေချင်ဘူး။အားမပေးပါဘူး။သူတို့ဖက်ကကြည့်ရင်လဲဒါလဲမှန်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်ကချင်းရိုးရာအစားအသောက်ကိုပဲထုတ်လုပ်ရောင်းချချင်တဲ့ စိတ်ကပဲအမြဲရှိနေတယ်။
တစ်ခြားးတိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ကချင်၊ရှမ်း၊ကရင်၊ဗမာတွေမှာသူတို့ရိုးရာအစားအသောက်တွေကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချင်းရိုးရာအစားအသောက်တွေကိုတခြားလူမျိုးတွေကသိပ်ပြီးသိတာ၊စားသေက်ကြတာမရှိဘူး။ခေတ်ရဲ့အခြေအနေအရရိုးရာအစားအသောက် လုပ်ငန်းဟာနာမည်ရလာနိုင်တယ်လို့ကျတော်မြင်တယ်။ဒီလို နဲ့ ကိုယ်လုပ်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းကို လုပ်ဘို့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
© 2020 Khonu. All rights reserved. Powered by Digital Business